वर्मोन्ट WIC | जेपीएमए, इंक
EWIC संग खरीदारी
तपाईंको कार्ड सक्रिय गर्न, हराएको वा चोरी कार्डको रिपोर्ट गर्न वा तपाईंको WIC ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्:
WIC कार्ड ग्राहक सेवा मद्दत लाइनमा कल गर्नुहोस् 1-855-769-8890। यो रेखा एक दिन खुला 24 घण्टा, हप्तामा7दिन।
भ्रमणको EBT कार्ड वेबसाइट
तपाईंको कल गर्नुहोस् स्थानीय जिल्ला WIC कार्यालय
तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड प्रयोग गर्दै
आफ्नो कार्ड सक्रिय गर्नुहोस्
जब तपाइँ क्लिनिकमा आफ्नो ईडब्ल्यूआईसी कार्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ, फिर्ता साइन इन गर्नुहोस् र तपाईंको4अंकको व्यक्तिगत पहिचान नम्बर वा PIN सेट अप गर्नुहोस्। पिन सेट अप गर्न, तपाईं निम्न गर्न सक्नुहुनेछ:
WIC EBT ग्राहक सेवामा कल गर्नुहोस् 1-855-769-8890
भ्रमणको WIC EBT वेबसाइट (तपाईंले आफ्नो खाता सेटअप गर्न एक प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड सिर्जना गर्नु पर्छ। कार्डधारक पोर्टलमा ड्रपडाउन मेनुबाट "वर्मोन्ट" चयन गरी सुरु गर्नुहोस्।)
PIN सिर्जना गर्दा तपाईंको जन्म मिति, जिप कोड र ईWIC कार्ड नम्बर तयार छ।
एकपटक तपाईंले PIN सिर्जना गरेपछि, तपाईंको eWIC कार्ड एक अधिकृत WIC किराना स्टोरमा प्रयोग गर्न तयार छ।
तपाईंको EWIC कार्ड खाता ब्यालेन्स जान्नुहोस्
प्रत्येक महिनाको सुरुमा, तपाईंको पूरा खाना प्याकेज उपलब्ध हुनेछ। भरपर्दो महिनामा तपाइँको ब्यालेन्स जाँच गर्न, तपाईं सक्नुहुन्छ:
कल 1-855-769-8890 वा वेबसाइट जाँच गर्नुहोस् https://connectebt.com/ (फोन नम्बर र वेबसाइट तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डको पछाडि सूचीबद्ध छ)
WIC फूड खरीदहरू गरेपछि तपाईंको रसिदमा अन्तिम ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्।
तपाईंको पसल गर्नु अघि ग्राहक सेवामा आफ्नो सुरुवात ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्।
खाद्य सूची र किनमेल गाइड
तल क्लिक गर्नुहोस् Vermont WIC खाद्य सूची हेर्न।
खाद्य सूची हेर्नुहोस्
वर्मोन्ट कार्यक्रम र सपिङ्ग गाइड हेर्नको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्
किनमेल गाइड हेर्नुहोस्
तपाईंको पोषण लाभहरू बुझ्नुहोस्
तपाईंको WIC खाद्य प्याकेजमा भएका वस्तुहरू प्रत्येक फाईल श्रेणीको लागि विशिष्ट मात्राहरू समावेश गर्दछ। उदाहरणका लागि:
4 कम फ्याट दूधको ग्यालेन्स (तपाइँ 1% चयन गर्नुहुन्छ वा तपाईंको प्राथमिकताको आधारमा स्किम गर्नुहोस्);
36 नाश्ता अनाज को औंस (तपाईं अनुमोदित सूची बाट गर्म वा चिसो चयन गर्नुहुन्छ);
32 औंसहरूको सम्पूर्ण अन्नहरू (तपाईंले पूरै गेहूं रोटी, खैरो चावल, सम्पूर्ण गेहूं वा मकई अष्टिलास, वा सम्पूर्ण गेहूं पास्ताको अनुमोदित 16 औंस प्याकेजहरूबाट छनौट गर्नुहुन्छ)।
फल र तरकारी लाभ एक डलर को राशि हो, उदाहरण को लागि: बच्चाहरु को लागि $ 8 र महिलाहरु को लागि 11 $ (तपाईं ताजा, जमे भएका या डिब्बाबंद फलहरु र सब्जियों देखि चुनछन)
WIC द्वारा अनुमति दिइएको सबै खाद्य उत्पादनहरूको विवरणमा पाइन्छ वरमन्ट WIC कार्यक्रम र खाद्य गाइड। यहाँ हेर्नुहोस् वा तपाईंको स्थानीय WIC अफिसमा एक प्रतिलिपि लिनुहोस्।
तपाईंको खातामा क्रेडिट गरिएको प्रत्येक महिना तपाईंको सबै WIC फूडहरू किन्नुहोस्। अनपर्चित फूडहरू "लेग्न" गर्दैनन त्यसैले प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन तपाईंको सबै WIC फूडहरू किन्नुहोस्। सबै WIC खाताहरू महिनाको अन्तमा "शून्य बाहिर" छन्।
तपाईंको eWIC कार्डको साथ किनमेल गर्दै
तपाईंलाई के चाहिन्छ भनेर खरिद गर्नुहोस्। तपाईं एकै समयमा आफ्नो सबै खाना किन्न छैन!
तपाईंको कार्ड चेक आउटमा तयार छ।
लेनदेनको सुरुवातमा तपाईंको eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
अनुमोदित खाद्य वस्तुहरु र तपाईं को खरीद को फलहरु को फलहरु र सब्जियों को मात्रा तपाईंको WIC खाता देखि कटौती गरिनेछ।
कैशियरले तपाईंलाई एक रसीद दिनेछ जसले तपाईंको बाँकीको ब्यालेन्स देखाउँदछ र मितिको म्याद समाप्त हुन्छ।
तपाईंको भुक्तानीको अर्को फाराम अघि तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड स्वाइप गर्न सधैं महत्त्वपूर्ण छ।
कुनै बाँकी शेष रकम स्टोर द्वारा स्वीकृत नगद, EBT, SNAP, वा भुक्तानीको अन्य रूपको साथ भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
मेरो पिनको बारेमा
PIN एक चार अंकको गोप्य नम्बर हो जुन, कार्ड सहित, तपाईंको WIC फाईलहरूमा पहुँच अनुमति दिन्छ। पिन चयन गर्दा, चारवटा नम्बरहरू छान्नुहोस् जो तपाईंलाई सम्झन सजिलो हुन्छ, तर कसैको लागि कडा मेहनत गर्न (उदाहरणका लागि, तपाईंको अभिभावक वा बालबालिकाको जन्मदिन)।
तपाईंको कार्डमा तपाईंको पिन लेख्नुहोस्।
तपाईंको PIN लाई कुनै पनि व्यक्ति नगर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। यदि कसैले तपाईँको PIN जान्दछ र तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको खाद्य लाभ प्राप्त गर्न तपाईँको कार्ड प्रयोग गर्दछ, ती लाभहरू प्रतिस्थापन गरिने छैन।
के भयो भने म मेरो पिन बिर्सन्छु वा परिवर्तन गर्न चाहन्छु?
तपाईं आफ्नो पिन धेरै तरिकाहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ:
तपाईंको अनलाइन खातामा जानुहोस् connectebt.com
तपाईंको eWIC कार्डको पछाडि टोल फ्री नम्बरलाई कल गर्नुहोस्।
तपाईंको पिन अनुमान लगाउन प्रयास नगर्नुहोस्। यदि सही PIN तेस्रो प्रयासमा प्रविष्ट गरिएको छैन भने, तपाईंको पिन लक हुनेछ। यो कसैले तपाईंको पिन अनुमान लगाएको छ र तपाईंको फायदा प्राप्त गरी सुरक्षाको रूपमा गरिन्छ। तपाईंको कार्ड अनलक गर्न दुई तरिकाहरू छन्:
तपाईंको eWIC कार्डको पछाडि टोल फ्री नम्बरलाई कल गर्नुहोस्
आधी रात सम्म पर्खनुहोस् र तपाईंको खाता स्वतः अनलक हुनेछ